Qaraxyo khasaaro geystay oo ka dhacay Degmada Baraawe ee Koonfur Galbeed - Awdinle Online
Qaraxyo khasaaro geystay oo ka dhacay Degmada Baraawe ee Koonfur Galbeed
April 24, 2020 (Awdinle Online) – Saldhig ay deganyihiin Ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Uganda ayaa waxaa lagu qaaday weerarro qaraxyo ah oo loo adeegsaday gaadiid lagusoo xiray waxyaabaha qarxa, sida ay sheegeen mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Degmada.
Guddoomiyaha Degmada Baraawe Cumar Sheekh Cabdi oo la hadlay Idaacadda Maxalliga ah ee Kulmiye ayaa waxa uu sheegay in laba gaari oo qaraxyo siday ay soo aadeen dhinaca farriinsinka ay ku leeyihiin ciidamada AMISOM, balse la risaaseeyay halkaas oo uu mid kamid ah gawaaridii ku qarxay, halka kan kalena uu ku qarxay meel ku dhow madaarka Magaalada Baraawe .
Cumar Sheekh Cabdi ayaa waxa uu intaa ku daray in qaraxii dembe uu waxyeello soo gaarsiiyay garoonka Magaalada Baraawe ee Gobolka Shabeellaha hoose.
Dhinaca kale Ururka Al-shabaab ayaa waxey sheegteen masuuliyadda weerarkaasi.
Previous articleEuropean Union warns freedom of expression pandemic in Somalia
Next articleFaah Faahin: Al-Shabaab oo weerar qaraxyo ismiidaamin ku qaaday Saldhig AMISOM ee Baraawe